Public Health in Myanmar: Ectopic Pregnancy
လူ့ဘ၀ဆိုတာအလွန်ရခဲပါတယ်။ ခက်ခဲလှတဲ့လူ့ဘ၀ထဲကိုရောက်ဖို့ မိခင်ဝမ်းထဲမှာ ကိုးလလွယ် ၊ ဆယ်လဖွားမြင်ကာ လူရယ်လို့ဖြစ်လာကြပါတယ်။ တစ်ချို့က လောကကြီးထဲကို အဆင်ပြေပြေနဲ့ရောက်လာကြသလို ၊ အချို့ကလည်း အဆင်မပြေမှုပေါင်းများစွာနဲ့ ရောက်လာကြပါတယ်။ ဒီလိုလွဲမှားမှုတွေထဲမှာ သူတို့လေးတွေဟာလည်း လွဲမှားခြင်းများစွာနဲ့ လူ့ဘ၀ထဲကို ၀င်ရောက်ဖို့အကြောင်းဖန်လာကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အကြောင်းမလှခဲ့ကြလို့ လူသားတစ်ယောက်ဖြစ်ခွင့်မရခဲ့ကြပါဘူး။ သူတို့လေးတွေရဲ့ လွဲမှားမှုတွေကို ပိုက်ထွေးခဲ့ရသူမိခင်တွေမှာလဲ အခက်အခဲပေါင်းများစွာနဲ့ ကြုံတွေ့ခဲ့ရသလို ၊ မိမိတို့အသက်ကိုပါ ရင်းနှီးခဲ့ရသူတွေရှိပါတယ်။ ဒါဆိုရင် သူတို့လေးတွေ ၊ တနည်းအားဖြင့် လူသားအလောင်အလျာလေးတွေမှာ ဘာတွေလွဲမှားနေကြတာလဲ ။ သူတို့လေးတွေလွဲနေတာကတော့ နေရာလွဲမှားမှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ လူရယ်လို့မဖြစ်ခင်ကတည်းက လွဲမှားမှုတွေနဲ့ သူတို့အကြောင်း ၊ သို့မဟုတ် နေရာလွဲသန္ဓေတည်ခြင်းအကြောင်း ( Ectopic Pregnancy ) ကို တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
နေရာလွဲသန္ဓေ ( Ectopic Pregnancy ) ဆိုတာဘာလဲ
နေရာလွဲသန္ဓေဆိုတာကတော့ သန္ဓေသားလောင်းဟာ မိခင်ရဲ့ သားအိမ်အတွင်းမှာစွဲတည်ကြီးပြင်းရမယ့်အစား ၊ သားအိမ်ရဲ့အပြင်ဘက် အခြားသောနေရာတွေမှာ စွဲတည်နေခြင်းကိုခေါ်တာပါ။ မိခင်ရဲ့သားအိမ်သည်သာ သန္စေသားအတွက် ကြီးထွားရှင်သန်ဖို့ အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်တဲ့အတွက် ၊ ဒီလို သားအိမ်ရဲ့ပြင်ပမှာ နေရာလွဲမှားစွာ စွဲတည်ခဲ့ကြတဲ့ သန္ဓေသားလောင်းတွေဟာ လူသားတစ်ယောက်အဖြစ် ကြီးထွားရှင်သန်ခွင့်မရကြပါဘူး ။ မိခင်တွေမှာလဲ အသက်ဘေးနဲ့ရင်ဆိုင်ကြပါတယ်။
မမျိုးပွားအင်္ဂါနှင့် သန္ဓေစွဲတည်ခြင်း
နေရာလွဲသန္ဓေအကြောင်းကို သိရှိဖို့အတွက် မမျိုးပွားအင်္ဂါအကြောင်းကို ရှေးဦးစွာသိရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ မမျိုးပွားအင်္ဂါမှာ အဓိက ပါဝင်တဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေကတော့ -
၁။ သားအိမ် ( Uterus )
၂။ သားဥနှစ်လုံး ( Ovaries , left and right )
၃။ သားဥပြွန်နှစ်ခု ( Fallopian Tube or Ovidut )
၄။ သားအိမ်ခေါင်းအပိုင်း ( Cervix )
၅။ ယောနိလမ်းကြောင်း ( Vagina ) တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
သားအိမ်ဟာ ၀မ်းဗိုက်အောက်ဘက်ပိုင်း ၊ ဆီးအိမ် ( Urinary Bladder ) ရဲ့အနောက်ဘက်မှာတည်ရှိပြီး ၊ သားအိမ်ရဲ့ဘေး ဘယ်၊ ညာတစ်ဘက်တစ်ချက်မှာတော့ သားဥ ( Ovary ) တစ်လုံးစီတည်ရှိပါတယ်။ သားအိမ်နဲ့ သားဥတွေကို ဆက်သွယ်ပေးထားတာကတော့ သားဥပြွန် ( Fallopian Tube or Ovidut ) တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ သားဥပြွန်တွေရဲ့ အဖျားပိုင်းမှာတော့ သားဥမှ ခြွေချပေးလိုက်တဲ့ မျိုးဥတွေကို ဖမ်းယူဖို့ လက်ချောင်းပုံစံ အမြှင်လေးများ ( Fimbriae ) လေးများပါရှိပါတယ်။
အမျိုးသမီးတစ်ယောက် အပျိုဖော်ဝင်သည့်အချိန်မှစတင်ပြီး သားဥတွေက မျိုးဥများကို စတင်ခြွေချပေးပါတယ်။ ဓမ္မတာသွေးစတင်လည်ပတ်ပြီး မိခင်လောင်းဘ၀ကို ခံယူဖို့အသင့်ပြင်ဆင်ကြပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့ သားဥမှ မျိုးဥများကို ခြွေချပေးခြင်းကို သားဥကြွေခြင်း ( Ovulation ) လို့ခေါ်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် သားဥမှ ခြွေချပေးလိုက်သော မျိုးဥများကို သားဥပြွန်က ဖမ်းယူပါတယ်။ ထိုသို့ဖမ်းယူထားသော မျိုးဥများသည် အမျိုးသား၏ သုတ်သွေး ( Sperm ) နှင့် တွေ့ဆုံမိကာ မျိုးပွားမှုဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ သုတ်သွေးသည် မမျိုးပွားလမ်းကြောင်းအတွင်းတွင် ၂၄ နာရီ အသက်ရှင်နိုင်ပြီး ၊ မမျိုးဥသည် ကြွေကျသည့်အချိန်မှ ၁၂ မှ ၂၄ နာရီအထိရှင်သန်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် မမျိုးဥနှင့် သုတ်သွေးတို့တွေ့ဆုံပြီး မျိုးပွားမှုဖြစ်စဉ်များ ( Fertilization ) စတင်ဖြစ်ပွားသော နေရာမှာ သားဥပြွန်၏ အကျယ်ဆုံးအပိုင်းဖြစ်သည့် ထိပ်ဖျားပိုင်း ( Ampullary region ) ဖြစ်ပါတယ်။ မျိုးအောင်သောမျိုးဥများ ( Fertilized egg ) ကို သားဥပြွန်တစ်လျှောက်သယ်ဆောင်သွားပြီး သားအိမ်ဆီသို့ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်။ ထို့နောက် သန္ဓေသားလောင်းသည် သားအိမ်ရဲ့ နံရံမှာ စွဲတည်ပြီး ကြီးထွားလာပါတယ်။ နေရာလွဲသန္ဓေတွင် သန္ဓေသားလောင်းသည် သားအိမ်ဆီသို့ မရောက်ရှိဘဲ သားအိမ်၏ ပြင်ပနေရာများတွင် စွဲတည်နေခြင်းဖြစ်သည်။
သန္ဓေအောင်သော မျိုးဥအား သားအိမ်ဆီသို့ သယ်ဆောင်ပုံအဆင့်ဆင့်
၁။ သားဥပြွန် ( Fallopian Tube )
နေရာလွဲသန္ဓေဖြစ်ပွားမှု၏ ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းသည် သားဥပြွန်တွင်ဖြစ်ပွားပြီး ၊ ပြွန်သန္ဓေ ( Tubal Pregnancy ) လို့ခေါ်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် သားဥပြွန်၏ အကျယ်ဆုံးအဖျားပိုင်း ( Ampullary Region ) မှာဖြစ်ပွားပါတယ်။
၂။ သားဥ ( Ovary ) တွင် စွဲတည်ခြင်း ။
၃။ ၀မ်းဗိုက်ခေါင်း ( Abdominal cavity ) အတွင်းတွင် စွဲတည်ခြင်း ။
၄။ သားအိမ်ခေါင်း ( Cervix ) အပိုင်းတွင် စွဲတည်ခြင်း ။
နေရာလွဲသန္ဓေလောင်းများသည် ပုံမှန်ကလေးတစ်ယောက်အဖြစ်သို့ မည်သည့်အခါမျှ မရောက်ရှိဘဲ ပျက်စီးသွားတတ်ကြသည်။
E သည် ညာဘက် သားဥပြွန်အတွင်းမှ နေရာလွဲသန္ဓေသားဖြစ်သည်
* သားဥပြွန်အတွင်းမှ နေရာလွဲ သန္ဓေသားများ *
နေရာလွဲသန္ဓေဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဆိုတဲ့ အဓိကအကြောင်းအရင်းကိုတော့ မသိရှိပါဘူး ။ များသောအားဖြင့် သားဥပြွန်လမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့မှုကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ပါအခြေအနေတွေနဲ့ ဆက်စပ်တွေ့ရှိရတတ်ပါတယ်။ -
၁။ မမျိုးပွားအင်္ဂါများ ရောင်ရမ်းခြင်း ( PID - Pelvic Inflammatory Diseases ) ကြောင့် သားဥပြွန်ပိတ်ဆို့ခြင်း ။
၂။ ယခင်က သားဥပြွန်အား ခွဲစိတ်ဖူးခြင်း ။
၃။ အူအတက်ရောင်ရမ်းခြင်း ( Appendicitis )။
၄။ သားဥပြွန်ရောင်ရမ်းခြင်း ( Salpingitis ) ။
၅။ ၀မ်းဗိုက်အတွင်းပိုင်း အင်္ဂါများခွဲစိတ်ဖူးခြင်း ။ ( ဥပမာ - အူလမ်းကြောင်းခွဲစိတ်မှုများ )
၆။ သန္ဓေတားပစ္စည်းများ ( IUCDs - Intra Uterine Contraceptive Devices ) ကြောင့် သားဥပြွန်ရောင်ရမ်းခြင်း ၊ ပိတ်ဆို့ခြင်း ။
၇။ သန္ဓေတားဆေးများ ၊ အထူးသဖြင့် အရေးပေါ်အသုံးပြုသောတားဆေးများ ( Morning-after pill or emergency pill )။
၈။ လိင်မှတဆင့်ကူးစက်တတ်သောရောဂါများ ( Sexually Transmitted Diseases - STD )။
၉။ ယခင်က နေရာလွဲသန္ဓေတည်ဖူးခြင်း ။
နေရာလွဲသန္ဓေဟာ ကိုယ်ဝန် ၁၀၀ တွင် ၁ ယောက်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
နေရာလွဲသန္ဓေတွင်သိသာထင်ရှားသော လက္ခဏာများကို ကိုယ်ဝန် ၅ ပါတ်မှ ၈ ပါတ်အတွင်း စတင်ခံစားရတတ်ပါတယ်။ နေရာလွဲသန္ဓေတွင် အဓိကခံစားရသော လက္ခဏာမှာ နာကျင်ခြင်း ( Pain) ဖြစ်ပြီး ၊ နေရာလွဲ သန္ဓေကြောင့် ဖြစ်ပွားသော သွေးယိုစီးမှုကြောင့် ခံစားရခြင်းဖြစ်သည်။ ( ဥပမာ - နေရာလွဲ သန္ဓေသား ကြီးထွားလာမှုကြောင့် သားဥပြွန် ပေါက်ကွဲခြင်း )
နေရာလွဲ သန္ဓေတွင်တွေ့ရှိရသော လက္ခဏာတွေကတော့ -
၁။ အစောပိုင်းတွင် သာမန်ကိုယ်ဝန်ကဲ့သို့လက္ခဏာများ ( ဥပမာ - ဓမ္မတာထိန်ခြင်း ၊ ပျို့အန်ခြင်း ၊ ရင်သားများနာကျင်ခြင်း )။
၂။ အဓိက အရေးကြီးသော ပထမဆုံးလက္ခဏာကတော့ ၀မ်းဗိုက်အတွင်း စူးရှနာကျင်စွာ အောင့်ခြင်း ( Abdominal Pain ) ဖြစ်ပါတယ်။ ဓါးနှင့်ထိုးသကဲ့သို့ စူးရှစွာအောင့်တတ်ပါတယ် ( Sharp and Stabbing Pain ) ။ တစ်ခါတစ်ရံ ပခုန်းထိပ်ဖျားတွင် နာကျင်ခြင်းကို ခံစားရတတ်ပါတယ် ( Shoulder Tip Pain )။
၃။ ယောနိလမ်းကြောင်းမှ သွေးယိုစီးခြင်း ( Vaginal bleeding or spotting )။
၄။ သွေးယိုစီးမှုကြောင့် သွေးဖိအားနည်းခြင်း ( Low Blood Pressure ) ၊ မေ့မြောခြင်း ( Fainting ) ။
၅။ နောက်ကျောအောက်ဘက်ပိုင်းနာကျင်ခြင်း ( Lower back Pain ) ။
သွေးထွက်များပါက သွေးလန့်ခြင်း ( Shock ) ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အလွန်အရေးကြီးသောအခြေအနေဖြစ်ပြီး အရေးပေါ်ထိရောက်သောကုသမှုများပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများအနေနဲ့ အထက်ပါလက္ခဏာများကို ခံစားရပြီဆိုရင် သက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန် ၊ ဆေးရုံများ သို့ အမြန်ဆုံးဆက်သွယ်သွားရောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
နေရာလွဲသန္ဓေသားသည် သာမန်သန္ဓေသားများကဲ့သို့ ကြီးထွားရှင်သန်စေဖို့မဖြစ်နိုင်ပါ။ နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးများမဖြစ်လာမီ ဖယ်ရှားပြစ်ခြင်းသည်သာ အန္ဒရာယ်အကင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ နေရာလွဲသန္ဓေအတွက် ကုထုံးတွေကတော့ သန္ဓေသားအရွယ်အစား ၊ အခြေအနေတွေပေါ်မှာ မူတည်ပြီးကွဲပြားပါတယ်။
၁။ သန္ဓေသားကြီးထွားလာမှုကြောင့် သားဥပြွန်ပေါက်ကွဲခြင်း ၊ သွေးယိုစီးခြင်း ၊ သွေးလန့်ခြင်းကဲ့သို့ ရေးပေါ်အခြေအနေများကြုံတွေ့ပါက အမြန်ဆုံး ခွဲစိတ်ကုသဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
၂။ အကယ်၍ သန္ဓေသားအရွယ်အစားသေးငယ်နေပါက ၊ အထက်ဖော်ပြပါ အရေးပေါ်အခြေအနေမျိုးမရှိပါက ဆေးဝါးများ ( ဥပမာ - Methotrexate ) ကို အသုံးပြုပြီး သန္ဓေသားကို ဖယ်ရှားပစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
နေရာလွဲ သန္ဓေသား ဟုတ် ၊ မဟုတ်သိရှိနိုင်သော စမ်းသပ်မှုနည်းလမ်းများ များစွာရှိသော်လည်း ( Ultrasound ) ဖြင့် သန္ဓေသားတည်ရှိနေသောနေရာကို ကြည့်ရှုခြင်းဟာ အလွယ်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
နေရာလွဲသန္ဓေ တစ်ကြိမ်တည်ဖူးပါက နောက်တစ်ကြိမ် ဖြစ်ပွားနိုင်မှုမှာ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ နောက်တစ်ကြိမ် ကိုယ်ဝန်ဆောင်လိုပါက ကိုယ်ဝန်မဆောင်မီ သက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန်များနှင့် ကြိုတင်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
အချုပ်အားဖြင့်ဆိုသော် နေရာလွဲသန္ဓေတည်ခြင်းကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် တစ်လင် ၊ တစ်မယားစနစ်ကိုကျင့်သုံးပါ ။ လိင်မှကူးစက်တတ်သောရောဂါများမရစေဖို့ အပျော်အပါးလိုက်စားခြင်းကို ရှောင်ကျဉ်ပါ။ ရောဂါရရှိပါက ထိရောက်သောကုသမှုများကို ခံယူပါ။ ကျန်းမာရေးအသိ အစဉ်ရှိစွာဖြင့် လူသားတိုင်းကျန်းမာပျော်ရွှင်ပြီး ၊ လွဲမှားမှုများမှ ကင်းဝေးနိုင်ပါစေကြောင်း ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်။ လေးစားစွာဖြင့် -
၁။ Langman's Clinical Embryology 6th edition.
Labels: Ectopic pregnancy, Reproductive Health
အမျိုးသမီးတွေအတွက် သိထားရမဲ့ သိထားသင့်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗဟုသုတ ပိုပြီးတိုးပွားလာပါတယ်။
သားဥပြွန်မှာ အရည်ကြည်အိတ်လေးတွေ ရှိနေလို့အဲဒီအရည်ကြည်အိတ်လေးတွေက ပိတ်ဆို့ ထားတာကြောင့် သားသမီးလိုချင်ပေမဲ့ မရနိုင်တဲ့ အကြောင်း လေးကိုလည်းရေးပေးပါအုံး။ ပြည့် ပြည့် စုံစုံနဲ့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေး သိချင်လို့ ပါ။ ကြားဖူးနားဝပဲ ရှိတာမို့တိတိကျကျလေး သိထားချင်ပါတယ်၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အမျိုးသမီးများ(အိမ်ထောင်မရှိသူ အပျိုစင်များ) လစဉ် ဓမ္မတာ ပုံမှန် မလာခြင်း
လစဉ် ပုံမှန်ဓမ္မတာ မလာခြင်း နှင့်ပတ်သက်ပြီး သိလိုပါတယ်၊ ထိုသို့ လစဉ် ပုံမှန်မဟုတ်ခြင်း သည် အခြားသော disease များ (ဥပမာ - cancer ရောဂါ၊ အိမ်ထောင်ကျပြီးနောက် ကလေးမရနိုင်ခြင်း) ဖြစ်ပွားနိုင်ခြင်းရှိမရှိ သိလိုပါတယ်၊ ထိုအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်ပြီး အမျိုးသမီးများကိုအကျိုးပြုမဲ့ Post တစ်ခုလောက်ရေးပေးပါလို့တောင်းဆိုလိုပါတယ်...ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Shang Noom said...
Ectopic Pregnancy အကြောင်းဖတ်ရတာ ဗဟုသုတရရှိပါတယ်။ ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီးတစ်ခုမေးချင်ပါတယ်။ တကယ်လိုများ ectopic pregnancy ကြောင့် Fallpplan Tube တစ်ဖတ်ဖြတ်လိုက်ရရင်ကော နောက်ထပ်ကိုဝန်ရရှိဖိုိ့ဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်းရှိပါသလဲ???